Iray amin’ireo gadra nitsoaka an’Antanimora… : noraisim-potsiny teny am-pakam-bilona i Solofoniaina | NewsMada
Iray amin’ireo gadra nitsoaka an’Antanimora… : noraisim-potsiny teny am-pakam-bilona i Solofoniaina
Telo andro taorian’ny nitsoahany ny fonjan’Antanimora, tra-tehaky ny zandary, teny Andriantany, Ambohidratrimo, omaly maraina, teo am-pakam-bilona, i Solofoniaina. Mbola miriaria any kosa ireo namany roa lahy.
Tratry ny zandary, omaly maraina, tokony ho tamin’ny 7 ora, ny gadra iray, antsoina hoe Solofoniaina, iray amin’ireo telo lahy nandositra teny Antanimora. Teny am-pakana vilona izy io no tratra tany Andriantany Ambohidratrimo. Voalazan’ny zandary fa niafina tao amin’ny dadabeny ity Solofoniaina ity. “Efa nisy ny fampilazana ny fokonolona ny amin’izay mahita olona vahiny na mampiahiahy mba hampandre haingana ny mpitandro filaminana. Tamin’ny alalan’izany ny nahafantarana ny fisian’ity gadra nitsoaka teny Ambohidratrimo ity”, hoy ny zandary. Voalaza fa eny Itaosy ity Solofoniaina ity no mipetraka, saingy tsy nankeny izy fa teny amin’ny dadabeny.
Nambaran’ny zandary hatrany fa tsy nisy sarin’izy ity nomen’ny mpandraharaha fonja, saingy fantatry ny zandary kosa izy rehefa natao ny fandihadiana rehetra. Tsy mbola voatsara izy io fa notanana am-ponja vonjimaika noho ny fanolanana ary izao tafatsoaka izao. Efa voasambotra ary hatolotra tsy ho ela ny mpandraharaha fonja izy rehefa avy hanaovana famotorana.
Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo roa lahy, izay mbola tsy hita popoka hatramin’izao.
Gadra vehivavy tafatsoaka
Tsy ny lehilahy ihany no mitsoaka ny fonja itazonana azy fa hatramin’ny vehivavy ihany koa. Vehivavy iray antsoina hoe Lalao Adeline Aimée, zanaka jeneraly, tafatsoaka ny fonjan’i Manjakandriana. Tsy mbola hita izy io, izay voaheloka noho ny fisolokiana sy fandrahonana olona.
Toe-javatra izay hafahafa ihany ity vaky fonja nisesisesy ity. Misy ny goragora sa noho ilay filazana hatrany fa efa antitra sy tsy ampy fitaovana ny fonja eto amintsika ka mora ny mandositra aminy? Raha izany, tokony ho efa maro ny gadra tafatsoaka. Misy ihany koa ireo mihevitra fa mety misy ambadika ity raharaha ity, noho ny resa-politika mafana eto an-toerana. Feo mandeha ihany anefa izany fa andrasana ny fanazavana avy amin’ireo tompon’andraikitra amin’ny fepetra mifanaraka amin’izao gadra tafatsoaka matetika izao. Hatreto, tsy mbola nandrenesam-peo izy ireo.